Ryan Giggs oo ku dhawaaqay xiddigaha uu kala qeyb galayo isreeb-reebka Euro 2020… (Miyuu ka maqan yahay Gareth Bale?) – Gool FM
(Wales) 12 March 2019. Macallin Ryan Giggs ayaa magacaabay xiddigaha uu kala qeyb galayo kulamada isreeb-reebka tartanka Euro 2020.
Gareth Bale ayaa ka soo muuqday shaxda 31-ka ciyaaryahan ee xulka qaranka Wales uga qeyb galaya tartanka Euro 2020-ka, inkastoo uu seegay kulankii ugu dambeeyey ee ay ciyaartay kooxdiisa Real Madrid.
Bale ayaa dhaawac canqowga ah uu soo gaaray kulankii ay Real Madrid guuldarrada kala kulmeen Ajax ee Champions League, laakiin waxa ay guul ka gaareen Axaddii naadiga Real Valladolid kulan ka tirsan horyaalka La Ligaha Spain.
Laacibka khadka dhexe ee kooxda Rotherham, Will Vaulks ayaa markii ugu horreysay looga wacay qaranka Wales, waxaana dhaawacyo ku seegay shaxda xulka James Chester iyo Andy King.
Difaaca kooxda Aston Villa ee Chester ayaan ciyaarin tan iyo dhammaadka bishii Janaayo maxaa yeelay waxa uu ka dhaawacan yahay jilibka, halka xiddiga khadka dhexe ee kooxda Leicester ee King uusan markale ciyaari doonin xilli ciyaareedkan kaddib markii uu dhaawac canqowga ka soo gaaray intii lagu jiray heshiiskii amaahda ee Derby.
Macallin Ryan Giggs xulkiisa Wales ayaa Wrexham ku wajihi doona Trinidad and Tobago kulan saaxiibtinnimo 20 bishan Maarso, ka hor inta aysan bilaabin ciyaarista tartanka Euro 2020-ka oo ay Magaalada Cardiff ku la ciyaari doonaan afar maalmood kaddib xulka Slovakia.
Liverpool oo Malaayiin lacag ah khasaari doonta haddii Coutinho uu ku biiro Man United!!